काठमाडौँमा श्रीमान-श्रीमतीको अनौठो ठगि धन्दा, एउटै घर एकातिर बन्धकी अर्को तिर बिक्रीका लागि बैना ! — Sanchar Kendra
काठमाडौँमा श्रीमान-श्रीमतीको अनौठो ठगि धन्दा, एउटै घर एकातिर बन्धकी अर्को तिर बिक्रीका लागि बैना !
काठमाडौँ, ४ चैत ।
उनलेले आफुले लिएको सबै बैना पैसा फिर्ता गर्ने बताइन् । उनले संचारकेन्द्रसँग कुरा गर्दै भनिन- “मैले कसैको पैसा खाएर मर्दिन, मर्नु नै परेपनि सबैको पैसा फिर्ता गर्ने छु । उहाँहरुले पनि दुखले कमाएको पैसा हो । मैले जस्ताको त्यस्तै फिर्ता गर्ने छु, ब्यबहार मिलाउदै छु ।”